Show All Most Popular Appetizers Bento Special (ဘန်တိုစပါယ်ရှယ်) Basic Sushi Rolls (အခြေခံဆူရှီလိပ်များ) Maki Sushi (ဆူရှီအလိပ်သေးများ) Temaki Sushi (ကန်တော့ပုံဆူရှီ) Iniri Sushi (အီနားရီဆူရှီ) Nigiri (နီဂီရီ) Gunkan Sushi (ရေညှိပတ်ဆူရှီ) Sashimi (ဆာရှီးမီ) Special Rolls (စပါယ်ရှယ်လိပ်များ) Smoothies Italian Soda Cold Drink New Menu Ramen (ခေါက်ဆွဲပြုတ်)
Bento Special (ဘန်တိုစပါယ်ရှယ်)
Basic Sushi Rolls (အခြေခံဆူရှီလိပ်များ)
Maki Sushi (ဆူရှီအလိပ်သေးများ)
Temaki Sushi (ကန်တော့ပုံဆူရှီ)
Iniri Sushi (အီနားရီဆူရှီ)
Gunkan Sushi (ရေညှိပတ်ဆူရှီ)
Special Rolls (စပါယ်ရှယ်လိပ်များ)
No.45,17th Street, Bet:81Street & 82nd Street, Mandalay, MM Aungmyethazan
S11. Salmon Maki (ဆယ်လ်မွန်မာကီ)
Sushi rice, seaweed and salmon (ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ ဆယ်လ်မွန်)
S3. CA Fried Roll (ကယ်လီဖိုးနီးယားဆူရှီကြော်)
S5. Crunch Roll (အကြွပ်ကြော်ဆူရှီ)
Sushi with crab stick, seasame, cucumber, avocado, tempura fried, eel sauce and mayonnaise (ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ ပုဇွန်တန်ပူရာကြော်၊ ဂဏန်းချောင်း၊ နှမ်း၊သခွားသီး၊ ထောပတ်သီး၊ တန်ပူရာမုန့်ကြော်၊ မရောနစ်ငါးရှဉ့်ခြောက်စပ်)
S12. Tuna Salad Maki (တူနာဆလပ်မာကီ)
Sushi rice, seaweed and tuna salad (ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ တူနာဆလပ်)
Sushi rice, seaweed, tempura soft shell crab, cucumber, avocado, lettuce, mayo and eel sauce(ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ ဂဏန်းပျော့တန်ပူရာကြော်၊ သခွားသီး၊ ထောပတ်သီး၊ ဆလပ်ရွက်၊မရောနစ်၊ ငါးရှဉ့်ဆော့စ်)
A6. Grilled Salmon (ဆယ်လ်မွန်ငါးကင်)
S6. Crab Stick Maki (ဂဏန်းချောင်းမာကီ)
Sushi rice, seaweed and crabstick (ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ ဂဏန်းချောင်း)
S13. Tuna Salad Roll (တူနာဆူရှီ)
Sushi rice, seaweed, tuna, seasame, cucumber , avocado, tobiko and mayo sauce (ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ တူနာ၊ နှမ်း၊ သခွားသီး၊ ထောပတ်၊ပုဇွန်ဥ၊ မရောနိဆော့စ်)
S10. Tuna Maki (တူနာမာကီ)
Sushi rice, tuna and seaweed (ဆူရှီထမင်း၊ တူနာ၊ ရေညှိ)
S14. Tempura Enoki Roll (တန်ပူရာအပ်မှိုကြော်ဆူရှီ)
Sushi rice, seaweed, fried tempura enoki, seasame, cucumber, avocado and mayo sauce (ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ အပ်မှိုကြော်၊ နှမ်း၊ သခွားသီး၊ ထောပတ်သီး၊ မရောနစ်ဆော့စ်)
A3. Grilled Shishamo (ရှီးရှားမိုးငါးကင်)
A4. Fried Shishamo (ရှီးရှားမိုးငါးကြော်)
A5. Grilled Saba (ဆာဘငါးကင်)
A9. Tempura Soft Crab (ဂဏန်းပျော့တန်ပူရာကြော်)
A10. Chicken Katsu (ကြက်သားပြားမုန့်ကပ်ကြော်)
A11. Grilled Mussels (ကမာ)
A12. Tamago (ကြက်ဥပေါင်း)
A13. Chicken Sandwich (ကြက်သားဆန်းဒ၀စ်ခ်ျ)
A14. Tuna Sandwich (တူနာဆန်းဒ၀စ်ခ်ျ)
A15. Cheese Sandwich (ချိစ့်ဆန်းဒ၀စ်ခ်ျ)
A16. Chocolate Toast (ချောကလက်တို့စ်)
A17. Cheese Toast (ချိစ့်တို့စ်)
Spicy Korean Chicken (ကိုးရီးယားကြက်ကြော်)(ကိုးရီးယားကွကျကွျော)
Fried Pork Ribs (ဝက်နံရိုးကြော်)(ဝကျနံရိုးကွျော)
Japanese Fried Rice (ဂျပန်ထမင်းကြော်)(ဂပြနျထမငျးကွျော)
B1. Salmon Bento (ဆယ်လ်မွန်ဘန်တို)
Grilled salmon,4pieces of ca roll, rice, seaweed salad, meso soup and veggie salad(ဆယ်လ်မွန်ကင်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားဆူရှီ၊ ထမင်း၊ ရေညှိဆလပ်၊ မီဆိုဟင်းရည်၊ အသီးအရွက်)
B2. Saba Bento (ဆာဘဘန်တို)
Grilled saba,4pieces of ca roll, rice, seaweed salad, meso soup and veggie salad (ဆာဘငါးကင်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားဆူရှီ၊ ထမင်း၊ ရေညှိဆလပ်၊ မီဆိုဟင်းရည်၊ အသီးအရွက်သုပ်)
B6. Meso Soup (မီဆိုဟင်းရည်)
B7. Seaweed Salad (ရေညှိသုပ်)
B8. Tuna Salad (တူနာအချိုသုပ်)
B9. Crab Salad (ဂဏန်းချောင်းအချိုသုပ်)
S1. California Roll (ကယ်လီဖိုးနီးယားဆူရှီ)
Rice, seaweed, crab stick, seasame, cucumber and avocado (ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ ဂဏန်းချောင်း၊နှမ်း၊ သခွားသီး၊ ထောပတ်သီး)
S2. Crab Salad Roll (ဂဏန်းချောင်းဆလပ်ဆူရှီ)
Rice, seaweed, crab stick, seasame, cucumber, avocado and mayonnaise (ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ ဂဏန်းချောင်း၊နှမ်း၊ သခွားသီး၊ ထောပတ်သီး၊ မရောနစ်)
S4. Tobiko Sushi (ပုဇွန်ဥဆူရှီ)
Sushi with tobiko, crab stick, seasame, cucumber and avocado (ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ ဂဏန်းချောင်း၊ နှမ်း၊ သခွားသီး၊ ထောပတ်သီး၊ ပုဇွန်ဥ)
S34. Hawaii Roll (ဟာဝိုင်ယီဆူရှီ)
Sushi rice, seaweed, crab stick, cucumber, avocado4kind of sauce and others...(ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ ဂဏန်းချောင်း၊ သခွားသီး၊ ထောပတ်သီး၊ ဆော့ (၄)မျိုးနှင့်အခြားအဆာပလာများ)
S9. Tobiko Maki (ပုဇွန်ဥမာကီ)
Sushi rice, seaweed and cucumber (ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ ပုဇွန်ဥ)
S15. Crab Salad Hand Roll (ဂဏန်းသားအချိုကန်တော့ပုံဆူရှီ)
Sushi rice, seaweed, crab stick, cucumber, avocado and mayo (ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ ဂဏန်းချောင်း၊ သခွားသီး၊ ထောပတ်သီး၊ မရောနစ်ဆော့)
S16. Tuna Salad Hand Roll (တူနာငါးအသားအချိုကန်တော့ပုံဆူရှီ)
Sushi rice, seaweed, tuna, cucumber, avocado and mayo(ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ တူနာငါးအသားချိူ၊သခွားသီး၊ ထောပတ်သီး၊ မရောနစ်ဆော့စ်)
S17. Tempura Crunch Hand Roll (တန်ပူရာအကြွပ်ကြော်ကန်တော့ပုံဆူရှီ)
Sushi rice, seaweed, fried tempura, cucumber and avocado (ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ တန်ပူရာအကြွပ်ကြော်၊ သခွားသီး၊ ထောပတ်သီး)
S19. Tempura Enoki Hand Roll (အပ်မှိုတန်ပူရာကြော်ကန်တော့ဆူရှီ)
Sushi rice, seaweed, tempura enoki, cucumber and avocado (ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ တန်ပူရာအပ်မှိုကြော်၊ သခွားသီး၊ ထောပတ်သီး)
S20. Sushi Rice Iniri (ဆူရှီထမင်းအီနားရီ)
S21. Crab Salad Iniri (ဂဏန်းချောင်းအချိုအီနားရီ)
S22. Tuna Salad Iniri (တူနာငါးအချိုအီနားရီ)
S23. Tobiko Iniri (ပုဇွန်အီနားရီ)
S26. Salmon Nigiri (ဆယ်လ်မွန်ငါးနီဂီရီ)
S27. Eel Nigiri (ငါးရှဉ့်နီဂီရီ)
S28. Shrimp Nigiri (ပုဇွန်နီဂီရီ)
S29. Octopus Nigiri (ရေဘ၀ဲနီဂီရီ)
S31. Crab Salad Gunkan (ဂဏန်းချောင်းအချိုရေညှိပတ်ဆူရှီ)
Shshi rice, seaweed, crab sticks, mayo( ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ ဂဏန်းသားအချို)
S32. Tuna Salad Gunkan (တူနာအချိုရေညှိပတ်ဆူရှီ)
Sushi rice, seaweed, tuna, mayo (ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ တူနာငါးအချို)
S33. Tobiko Gunkan (ပုဇွန်ရေညှိပတ်ဆူရှီ)
Sushi rice, seaweed, tobiko (ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ ပုဇွန်ဥ)
SH3. Salmon Sashimi (ဆယ်လ်မွန်ဆာရှီးမီ)
Sushi rice, seaweed, crab salad, seasame and mayo (ဆူရှီထမင်း၊ ရေညှိ၊ ဂဏန်းသားဆလပ်၊ နှမ်း၊ မရောနစ်)
Sushi Pizza with Chicken (ဆူရှီပီဇာ)
Baked Salmon Roll (ဆယ်လမွန်ကင်ဆူရှီ)
Strawberry purre and yogurt
Blueberry purre and yogurt
Raspberry purre and yogurt
N1. Teriyaki Chicken Roll (တာရီယာကီကြက်ကင်ဆူရှီ)
N2. Spicy Teriyaki Chicken Roll (တာရီယာကီကြက်ကင်အစပ်ဆူရှီ)
N3. Chicken Nugget Roll (ကြက်စဥကြော်ဆူရှီ)
N5. Teriyaki Chicken Maki (တာရီယာကီကြက်ကင်မာကီ)
N6. Spicy Teriyaki Chicken Maki (တာရီယာကီကြက်ကင် အစပ်မာကီ)
N7. Chicken Nugget Maki (ကြက်စဥကြော်မာကီ)
N8. Tamago Maki (ကြက်ဥပေါင်းမာကီ)
N9. Tamago Nigiri (ကြက်ဥပေါင်းနီဂီရီ)
N10. Chicken Nugget Temaki (Hand Roll) (ကြက်စဥကြော်ကန်တော့ပုံဆူရှီ)
N11. Squid Ring Tempura (ကင်းမွန်အကွင်း တန်ပူရာကြော်)
N12. Lotus Root Tempura (ကြာစွယ်တန်ပူရာကြော်)
N13. Seaweed Tempura (ရေညှိတန်ပူရာကြော်)
N14. Enoki Tempura (အပ်မှိုတန်ပူရာကြော်)
N15. Corndog (ကြက်အူချောင်းပေါင်မုန့်လိပ်ကြော်)
N16. Sausage Maki (ကြက်အူချောင်းမာကီ)
N17. Cheese Sausage Roll (ချိစ်ကြက်အူချောင်းဆူရှီ)
N18. Shio Sausage Roll (ကြက်အူချောင်းနှင့် အသားပေါင်းဆူရှီ)
N19. Sour & Spicy Tuna Salad (တူနာအသားချဉ်စပ်သုပ်)
N20. Sour & Spicy Crab Stick Salad (ဂဏန်းချောင်းချဉ်စပ်သုပ်)
N21. Kimchi Pancake (ကင်ချီပန်ကိတ်)
R1. Shio Ramen (ရာမန်ခေါက်ဆွဲပြုတ်အချို)
R2. Lemon Spicy Shio Ramen (သံပုရာချဉ်စပ် ရာမန်ခေါက်ဆွဲ)
R3. Miso Ramen (မီဆိုရာမန်ခေါက်ဆွဲ)
R4. Spicy Miso Ramen (မီဆို ချဉ်စပ်ရာမန်ခေါက်ဆွဲ)
R5. Kimchi Ramen (ကင်ချီ ရာမန်ခေါက်ဆွဲ)
R6. Milk Spicy Minced Meat Ramen (နို့ချဉ်စပ် ရာမန်ခေါက်ဆွဲ)
R7. Curry Rice (ကာရီထမင်း)
Choice of tempura shrimp, chicken katsu or pork cutlet